सौगात मुख्य भुमिकामा ‘कबड्डी’ को सिक्वेल ‘कबड्डी कबड्डी’ बन्ने ! « रंग खबर
सौगात मुख्य भुमिकामा ‘कबड्डी’ को सिक्वेल ‘कबड्डी कबड्डी’ बन्ने !
रंग खबर, काठमाण्डौं । यस वर्षको व्यवसायिक रुपमा सफल भएको फिल्म ‘कबड्डी’ को सिक्वेल बन्ने भएको छ । आगामी फागुनबाट फ्लोरमा जाने गरी तयारी भइरहेको उक्त सिक्वेलको नाम ‘कबड्डी कबड्डी’ रहने स्रोतले जनाएको छ ।
फिल्मका लागी सम्पुर्ण कलाकारहरु फाइनल भइसकेका छन् । सिक्वलमा कबड्डीका केही कलाकारहरू दोहोरिने छन भने अघिल्लो श्रृखंलाका निश्चल वस्नेत तथा राजन खतिवडा हुने छैनन् । अभिनेता सौगात मल्ल भने यस सिक्वलमा मुख्य भूमिकामा हुनेछन। दयाहागं राई र रिश्मा गुरूङ सिनेमामा यथावत रहनेछन।
हाल फिल्मको कथालाई अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको बताइएको छ । जानकारी अनुसार फिल्मको दोस्रो भागमा दया र रिश्मा गाँऊ फर्केपछिको कथा हुनेछ। यसमा चुनावको सेरोफेरोमा फिल्मको कथा अघि बढ्ने छ। फिल्मलाई पूर्ण रुपमा मुस्ताङमा छायाकंन गरिने बताइएको छ।
यसपटक पनि फिल्मलाई रामबाबु गुरूङले नै निर्देशन गर्नेछन।